From 'unukaa leh' to 'unu isku le' - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, June 30 in Politics
So said by xildhibaanad Sareedo Maxamed Cabdalle
Waxaa iigu dambaysay 87'kii bushii 3aad, kuma dhalan sida gabadhu sheegtay. Balse waan ku caqliyastay dugsi hoose, sare ilaa shaqo qaran.
Waxaan transit ku noqday wax ka yar saacad 2013 airport'ka muqdisho waxaan taagnaa diyaarada hoosteeda anigoo indhahayga marnaba ka leexin waayay badda oo midabkeedu ahaa buluug "tiq" ah.
Ma fiirinayn quruxdeeda lakiin waxaan galay xasuus yaraantaydii igasoo martay meesha indhahaygu markaas hayaan oo ahayd jabal ama "jamal" aan kasoo boodi jirnay si aan biyaha hoose ugasoo noqono si dabaal xirfadaysan ku jirto.
Waxaan ku imaan jirnay aniga iyo caruur kale si aad u dhib badan.
Waxaan kasoo dusi jirnay siligga anagoo godkii muuri lugaha kusoo qoynay intaan hawada iska fiirino in wax diyaarada kusoo jirto yaan si dhaqso ah dhabaheeda orad ku goyn jirnay.
Saacadaas waxaa i dawayn lahaa ingoo maqla guuxeeda balse nasiib daro buuqaa badnaa.
Gabadhaan warkeeda beel hebel baa boondheere bar ka degenayd waxba kama jiraan.
Cid qabiil daris ku ahayd muqdisho ma jirin haba yaraatee, xataa gobolada meeshii aabahaa shaqo loogu badelo yuu ku ilmo dhali jiray gurina ka dhisan jiray.
Xamar waxay ahayd 13- degmo.
Waxaa sanadahaas dhul bixin ka socotay xaafad bacaad ku taala oo gubadley la oran jiray oo xeebta xigtay, ma hubo inay kaaraan hoos tagaysay iyo laga doonayay xaafad gaara laakiin waxay ku socotay qorshe sax ah iyo dhulbixin dawladeed ah.
Waxaan maqlay midiina markii la dhaafo tabakaayo madaw waxaa degay beel aan dawladu maamulin oo iskeed u qaramawday waxaa loo bixiyay kaxda.
Waxaan kaloo maqlay xeryihii ciidanada iyo dhulkii isbitaalka xoogga ka dambeeyay waxay noqotay xaafad beelu degtay oo aan dawladu maamulin waxaa loo bixiyay dayniile.
Ma garanayo degmada 16-aad meeshay ka sameeyeen.
Muqdisho hadii la abaal marinayo xaqiiqdii way istaahishaa lakiin waxaa lagu abaal marin karaa inaysan beel gaar u yeelan
hadiise dalkii beelo kala goosteen oo siligga aan laga dusi karin dad caadila oo ka dhashay dadkii loogu yimid asalkeedii hore gacanta ha loo geliyo.
Haday inta bisleeyaan oo lawada faraxasho waxa mar walba faa'iidaya waa reer banaadir.
Haday reer garoowe wax ka siiyaana dadka faa'iidaya waa reer banaadir dadku waa dhaqaale meeshii dad joogo yaa dhaqaale laga sameeyaa waa lasoo jiitaa oo waliba kursiga looga kacaa.
On 7/1/2020 at 3:18 AM, gooni said:
Xildhibaanadaan ku qabso ku qadi meysidee wadaa nooh. Dadkii indhaha adkeyn jiray ayaa laga bartay ee ku dhibeysaa. Jartooda la ciyaareysaa.